Xiddig Mustaqbal Weyn Leh Oo Manchester United Ka Tegaya Usbuucan & Dersinka Kale Ee Isku Diyaarinaya Inay Ku Daydaan - Gool24.Net
Xiddig Mustaqbal Weyn Leh Oo Manchester United Ka Tegaya Usbuucan & Dersinka Kale Ee Isku Diyaarinaya Inay Ku Daydaan
Manchester United ayaa sii macasalaamaynaysa mid ka mid ah laacibiinteeda khadka dhexe oo ka dhaqaaqay Old Trafford, isla markaana toddobaadkan ku biiri doona naadi kale oo Ingiriiska gudihiisa ah.
Tababare Ole Gunnar Solskjaer oo raadinaya ciyaartooyo cusub oo uu safkiisa kusoo kordhiyo si ay United u noqoto koox ku tartami karta horyaalka Premier League, waxa uu xagaagan lasoo saxeexday hal ciyaartoy oo kaliya oo ah Donny van de Beek isaga oo ku raad-jooga laacibiin kale.
Laakiin dhinaca kale, waxa ka baxaya Old Trafford mid ka mid ah ciyaartoyda mustaqbalka weyn leh ee loo carbinayo inay sannadaha soo socda awood u yeeshaan inay la wareegaan masuuliyadda kooxda, isla markaana ay yeeshaan tayada iyo farsamada ay ku xammili karayaan culayska shaadhka Man United, taas oo horeba uu u muujiyey inuu gaadhsiisan yahay heerkaas.
Laacibka khadka dhexe ee James Garner oo ka tirsan kooxda U23 ee Man United, isla markaana kooxda koowaad marar dhawr ah fursad laga siiyey, caddeeyeyna inuu gaadhsiisan yahay heerkii uu ku difaaci lahaa sumcadda kooxda ayaa go’aansaday inuu iskaga tago Manchester United oo uu u wareego naadi kale.
19 ayaa kulan la yeeshay tababaraha kooxda Huddersfield Town ee Carlos Corberan oo uu doonayo inuu heshiis amaah ah ugu wareego xili ciyaareedka soo socdana uu ka ciyaaro horyaalka heerka labaad ee Championship-ka. Labada kooxood ee kale ee Blackburn Rovers iyo Milwall ayaa iyaguna xiisaynaya inay helaan adeegga ciyaareen ee Garner.
Waxa kale oo la filayaa in Manchester United ay ka tagaan inta aanu xidhmin suuqa iibka ciyaartoyda ee xagaagan, xiddigaha da’da yar ee Tthan Laird, Dishon Bernard, Dylan Levitt, Max Taylor iyo Arnau Puigmal oo dhamaantood ka tirsan kooxda U23 ee Red Devils, waxaanay ku baxayaan amaah inta ka horreysa October 5.
Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa go’aamiyey in labada ciyaartoy ee Teden Mengi iyo Ethan Galbraith ay sii joogaan Old Trafford oo ay kooxda koowaad ka mid noqdaan.
Garner, Mengi iyo Galbraith ayaa Man United u saftay kulamo ka tirsanaa Europa League laakiin waxa aanay dheelin labadii ciyaarood ee Copenahgen iyo Sevilla ee marxaladihii dhamaadka ee koobka lagu soo gunaanaday Cologne, Germany.
Man United waxay mar horeba amaaho ugu dirtay ciyaartoyda da’da yar ee Joel Pereira, Matej Kovar iyo Tahith Chong, waxaanu Garner raacayaa daqiiqooda.